लाज पचाएर अपमान डकार्ने सल्लाहकार ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more लाज पचाएर अपमान डकार्ने सल्लाहकार !
मंसिर २५ गते, २०७६ - १२:३७
सल्लाहकारहरूलाई प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यस्थितिको गलत फाइदा उठाएको आरोप बेलाबेलामा लाग्ने गर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई मृगौला रोगले मात्र नभएर निमोनिया, मेनेन्जाइटिस र एपेन्डिक्सले पालैपालो आक्रमण गरेका छन् । यसैलाई प्रमुख कारण बताउँदै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले मन्त्रीहरूलाई समेत बालुवाटार छिर्न दिएका छैनन् ।
पछिल्लो समयमा ‘नयाँ ढंग’ले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ जुन सह्रानीय छ । जनताले चुनेका प्रधानमन्त्री जनताप्रति जिम्मेवार बन्दै जानुपर्छ र ओलीले केही हदसम्म त्यो कार्यशैली देखाउन खोजेका छन् । तर जनताले भोट हाल्दै नहालेका, चाकडीका भरमा माथि पुगेकाहरूबाट जनता कहिलेसम्म अपमानित भएर बस्ने ?
काठमाडाैं । मंगलवार साँझ तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकूद (साग)को समापन समारोहमा भिडियोमार्फत सन्देश दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यसलगत्तै नियमित डायलासिसका लागि महाराजगंजस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक, भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर लगियो ।
तर केही नाम चलेका सञ्चारमाध्यमहरूले ग्राण्डी अस्पताल लगेको भन्दै समाचार सम्प्रेषण गरे । जनतालाई सही सूचना दिन दिनरात मेहेनेत गरिरहेका सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्रीलाई डायलासिस गर्न लगेको अस्पतालको नाम नै किन फरक पारेर समाचार लेखे त ?
यसमा सञ्चारमाध्यमहरूको दोष थिएन । भर्खरै नियुक्त प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले नै गलत सूचना दिएका थिए मिडियालाई । नयाँ सल्लाहकार अर्थात् सूर्य थापा । धेरै सञ्चारमाध्यमले उनलाई कोट गरेर प्रधानमन्त्री डायलासिसका लागि ग्राण्डी गएको समाचार लेखे ।
समाचार आएपछि उनै थापाले आफ्नो फेसबुक र ट्वीटर एकाउन्टमा प्रधानमन्त्री मनमोहन कार्डियोथोरासिक, भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर लगिएको भन्दै लेख्न भ्याए । अनि पत्रकारहरूले पुनः फोन गरे, उनले आफूले फेसबुक र ट्वीटरमा सूचना दिइसकेको भन्दै झुट बोलेको मान्न तयार भएनन् ।
थापाले मिडियामा गलत सूचना दिएनन् मात्र, मंगलवारै बिहान फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै आफ्ना आलोचकहरूलाई ‘ढेडु’को संज्ञा दिएका थिए । ‘मेरो स्टाटस हो कि, अरूको लेख सेयर गरेको भनेर छुट्याउन समेत नसक्ने मनुवा हुन् कि ढेंडु ? कति असभ्य र घृणित रहेछन् एउटा लेखसम्म पढ्न औकात र हैसियत नराख्ने स्यालहरू ? छि: छि: ! मान्छे बन्न कति गाह्रो परेको तिनलाई ?’
सोमवार कान्तिपुरका लागि गङ्गा बीसीले लेखेको ‘ओली दाहाल एकत्व’ शीर्षकको लेखमा रहेको केही अंश तानेर फेसबुकमा सेयर गरेका थिए थापाले । उनले तानेको अंशमा पार्टी एकता नभएको भए नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड सानो झुण्डको नेता बनेर बस्ने आशय थियो । त्यसपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको वर्षा खेप्नु परेको थियो ।
आलोचना सहन नसक्ने असहिष्णु व्यक्तित्वको परिचय बनाएका सूर्य थापालाई रक्षामन्त्रीसमेत रहेका ईश्वर पोखरेलका असाध्यैनिकट मानिन्थ्यो । परिस्थितिवश उनी प्रधानमन्त्री ओलीको सल्लाहकार हुन आएका छन् । थापा नेकपाको प्रचार विभागको उपप्रमुख पनि हुन् ।
पूर्वमाओवादी पक्षको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने थापा प्रचार विभागको उपप्रमुख सँगसँगै प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार रहनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नरहेको नेकपाकै नेताहरू स्वीकार्ने गर्छन् । स्कूल विभागलाई लिएर पार्टी एकताप्रक्रियामा अवरोध आइरहेका बेला थापाले पोखरेलको पक्ष लिए बापत पुरस्कारका रूपमा प्रचार विभागको उपप्रमुख बनाइएको टिप्पणी पनि नेकपा वृत्तमा हुनेगर्छ ।
केही महिनाअघि प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले पार्टीकै नेता कार्यकर्ताहरूलाई ‘छौंडा’ शब्द प्रयोग गरेका थिए । पाँच महिनाअघि रिमालले ट्वीट गर्दै कवितात्मक शैलीलाई लेखेका थिए, ‘भनिन्छ, छौंडाहरू आफैं चलमलाउँदैनन्, कसैले छोड्छन्, दु:ख दिन्छन् ! यी छौंडाहरू आफैं चलमलाएका हुन् की कसैले छोडेका ?’
सल्लाहकारको यस्तो भाषाको चौतर्फी आलोचना भयो । तर गलत शब्द प्रयोग गरेकोमा उनले सार्वजनिक रूपमा कमजोरी स्वीकार्न सकेनन् ।
केही महिनाअघि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले जनयुद्धको नेतृत्व गरेको भएपनि शान्ति मन पराउने नेता रहेको र आजसम्म कसैलाई एक झापड पनि नहानेको अभिव्यक्ति दिए । प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिको सन्दर्भ तोडमरोड गर्दै थापाले फेसबुकमा आफ्नै अध्यक्ष प्रचण्डमाथि अभद्र शब्द प्रयोग गर्दै अपमान गरे ।
त्यसपछि हाल राष्ट्रिय युवासंघका अध्यक्ष रहेका रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ले थापालाई कुण्ठा बोकेको आरोप लगाउँदै पद त्याग गर्न चेतावनी दिएका थिए । दीपशिखाको टिप्पणीमाथि थापाले प्रतिटिप्पणी गर्दै थप अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गरे ।
थापा पूर्वमाओवादीमाथि किन तुष पोख्छन् ?
२०७५ सालको जेठमा नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भयो । तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन एमालेको एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । एकीकरणका लागि वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरूले भरपूर मेहेनेत गरेका थिए ।
केही नेताहरूको मेहेनेत र दुवै पार्टीका तत्कालीन अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको अठोटले दुई पार्टी एकीकरण हुन सम्भव भएको थियो । जेठ २ गते दुई अध्यक्षबीच केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सहमति भयो । सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने (जुन मङ्सिर ४ गते बसेको सचिवालय बैठकको नयाँ निर्णयले खारेज गरिसकेको छ)लगायत पार्टीमा दुई अध्यक्ष र एक महासचिव हुने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भए ।
त्यतिबेला रक्षामन्त्रीसमेत रहेका ईश्वर पोखरेल तत्कालीन एमालेका महासचिव थिए । उनी ‘उरन्ठे’ पाराका भएकाले ओलीले पनि खासै विश्वास गर्दैनथे । त्यतिबेला एकताप्रक्रिया भाँड्ने तत्वको नेतृत्व पोखरेलले नै गरिरहेका थिए । अन्तिम समयमा आएर उनको महासचिव पद खोसियो ।
जेठ ३ गते बालुवाटारमा भएको दुई ठूला पार्टीहरूको एकता हुने अन्तिम समयसम्म पनि पोखरेललाई आफ्नो महासचिव पद खुस्किएको छ भन्ने जानकारी भएन । उनलाई हटाएर तत्कालीन एमालेका सचिव रहेका विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाइयो ।
पोखरेलको बुझाइमा प्रचण्डका कारण उनको महासचिव पद खुस्किएको थियो । त्यसयता पोखरेल र थापा दुई दाजुभाई मिलेर प्रचण्डलाई खुइल्याउने अभियान शुरू गर्न थाले । यथार्थमा पोखरेलले ओलीको विश्वाससमेत जित्न सकेका थिएनन । उनलाई हटाएर पौडेललाई ल्याउने गुरूयोजना ओलीकै थियो ।
त्यही घटनाक्रमपछि थापा पूर्व माओवादी पक्षप्रति सामाजिक सञ्जालमा असहिष्णु बन्ने गरेका छन् । यद्यपि थापा अहिले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार बनेका छन् भने पोखरेल प्रचण्डनिकट बन्न पुगेका छन् । स्कूल विभागको जिम्मेवारी पोखरेलले पाएपछि दुवै दाजुभाई चुप लागेका थिए । पछिल्ले समय पोखरेल अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न प्रचण्डनिवास खुमलटार पुग्ने गरेका छन् ।
पूजारी बनेर भेटी लुट्ने सल्लाहकारहरू !
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका बारेमा बाहिर गलत सूचना फैल्याएको आरोपमा सचिवालय टीम पनि हेरफेर गरिएको थियो । तर अहिले झन् बढी गैर-जिम्मेवार र असहिष्णु बनेर थापा सल्लाहकारका रूपमा बालुवाटार छिरेका छन् ।
जनताले दुईतिहाइ मत दिएर प्रधानमन्त्रीलाई देशको कार्यकारी बनाएर पठाए । जनताका अपेक्षाहरू अनन्त: भएपनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई बिस्तारै सम्बोधन गर्दै गइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा ‘नयाँ ढंग’ले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ जुन सह्रानीय छ । जनताले चुनेका प्रधानमन्त्री जनताप्रति जिम्मेवार बन्दै जानुपर्छ र ओलीले केही हदसम्म त्यो कार्यशैली देखाउन खोजेका छन् ।
तर जनताले भोट हाल्दै नहालेका, चाकडीका भरमा माथि पुगेकाहरूबाट जनता कहिलेसम्म अपमानित भएर बस्ने ?
मंसिर २५ गते, २०७६ - १२:३७ मा प्रकाशित